मुगाबेको प्रभाव अन्य अफ्रिकी मुलुकमा पर्न सक्ने अनुमान
‘भरतपुर घटना’दोहोरिन नदिने विषयमा सचेत छौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव [भिडियो]
पुस १५ गतेभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सबै मतपरिणाम आइसक्ने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आगामी निर्वाचनमा ‘भरतपुर घटना’दोहोरिन नदिने विषयमा आफूहरु सचेत रहेको बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकको समाचार कक्ष थापाथलीमा बुधबार कान्तिपुरकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले यही मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगले हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
मकर श्रेष्ठ, काठमाडौं, मंसिर ६, २०७४
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले दुई मेडिकल कलेजको यसअघि निर्धारण भइसकेको एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट बढाउन मेडिकल काउन्सिलमा लबिङ सुरु गरेको छ ।केयू स्रोतका अनुसार विराटनगरको नोबेल र विराट मेडिकल कलेजको सिट थप गर्न काउन्सिललाई आग्रह गरेको हो ।
चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेदवारहरू प्रदेश ६ का तीनवटा उत्तर–दक्षिण नाका जोडेर समृद्धिको ढोका खोल्ने नारासहित मतदाताकहाँ पुगिरहेका छन् । मुख्य तीन दलसहित सबै उम्मेदवारले हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा, मुगुको गमगढी–नाक्चेनाङला र डोल्पाको दुनै–मरिम्ला सडकलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । अहिले तीनै सडक बनाउन थालिए पनि काम सुस्त रहेकाले यी नाका कहिले जोडिन्छन् भन्ने टुंगो भने छैन ।
कर्मचारी मतदान केन्द्रतर्फ
भीमबहादुर सिंह, मंसिर ६, २०७४
पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि कर्मचारी मतदान केन्द्र खटिएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जाजरकोटले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रतर्फ खटाएको हो । कार्यालयले दुर्गम क्षेत्रका मतदान केन्द्रका लागि गत सोमबारदेखि कर्मचारी खटाएको छ ।
रञ्जु लमजुङमा भोट माग्दै
आश गुरुङ, मंसिर ६, २०७४
स्थानीय तह चुनावमा काठमाडौं महानगरको मेयरका प्रत्यासी रञ्जु दर्शना मत माग्दै लमजुङ आएकी छन् । विवेकशील दलबाट चुनावमा होमिएका उनी अहिले विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट भोट माग्दै आएकी हुन् । उमेर हदबन्दीले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावमा भाग लिन नपाएकी उनी अहिले भोट माग्दै देशका विभिन्न सहर पुग्ने गरेका छन् ।
सधैं आश्वासन मात्र
काशीराम डाँगी, मंसिर ६, २०७४
माडी गाउँपालिका–१ पेदीखोलाका अमरसिंह बुढामगरलाई चुनावप्रति खासै उत्साह छैन । घरदैलो अभियान क्रममा थुप्रै उम्मेदवार उनीसामु आइसके । नानाभाँती आश्वासन बाँड्दै भोट मागे ।
‘सहयात्री’ बीच टक्कर पहिलो चरण
विद्या राई, मंसिर ६, २०७४
प्रदेशसभा उम्मेदवार अजम्बर राई काङमाङ र राजेन्द्र राई कुनै बेला राजनीतिक सहयात्री थिए । ४० को दशकदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट उनीहरूको यात्रा सुरु भएको हो । उनीहरू दुवै एमालेको विद्यार्थी संगठनमा सक्रिय थिए । संघीय फोरमका काङमाङ लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट र एमालेका राई वामबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
राणा र तामाङको रस्साकस्सी
अनिश तिवारी, मंसिर ६, २०७४
निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभातर्फ लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का पशुपतिशमशेर राणा र वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार शेरबहादुर तामाङका बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ । २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि यी दुवै उम्मेदवार आमनसामने भएका थिए । राणालाई एमाले युवा नेता तामाङले हराएका थिए ।
एउटै गाउँका प्रतिस्पर्धी
विष्णुलाल बुढा, मंसिर ६, २०७४
मंसिर १० मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावमा एउटै गाउँका दुई उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठबन्धनबाट काइके गाउँपालिका–२, सहरताराका धनबहादुर बुढा र कांग्रेसबाट अंगदकुमार बुढा आमनेसामने भएका छन् ।
तीनजना सचिवमा बढुवा
हेलिकप्टरमार्फत मतदान सामग्री ढुवानी
रूपान्तरण, निर्वाचन र यथास्थितिवाद
डा. रेणु अधिकारी, मंसिर ६, २०७४
लामो समयदेखि रूपान्तरण प्रक्रियामा रहेको देश यतिबेला प्रसवको अन्तिम घडीमा छ । रूपान्तरण गर्न सक्ने, स्वस्थ, संसारलाई नै चकित पार्न सक्ने, सबैलाई हाँस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, यथास्थितिवादी, पहिलाकै संस्कार र संरचनालाई निरन्तरता दिने र कस्तो सन्तान जन्माउने जनताको हातमा छ । पूरा पढ्नुहोस्
पर्साका एक पढालेखा मित्रले बहिनीको बिहेको कुरो छिने । कुरोसँगै २० लाख रुपैयाँ दहेज दिने निर्णय छिने । केटा पक्षका आफन्त आएर दुई दिन लगाई वार्ता गरे । ‘मुश्किलले २० लाखमा झारियो’, ती मित्रले सुनाए, ‘सुरुमा त ३० लाख भनेका थिए ।’ पूरा पढ्नुहोस्
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, मंसिर ६, २०७४
समय क्रमसंँगै अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनाले अर्थतन्त्रमा कुन–कुन आर्थिक क्षेत्रको हिस्सा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । संरचनामा परिवर्तन आएर नै अर्थतन्त्र विकासको गतिमा अघि बढ्छ । पूरा पढ्नुहोस्
झमक घिमिरे, मंसिर ६, २०७४
अहिले वाम गठबन्धनको चर्चा जताततै चलिरहेको छ । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको गठबन्धन पनि विस्तारै चलिरहेको छ । जेजस्ता तर्क–वितर्क गरे पनि यो देशको हितमा छ, जनताको हितमा छ र सिंगो नेपाल र नेपालीको हितमा छ । पूरा पढ्नुहोस्
सम्पादकीय, मंसिर ५, २०७४
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्को सबभन्दा जोखिम तर महत्त्वपूर्ण मानिएको नदीको पानी विद्युत्गृहमा ल्याउने मुख्य सुरुङ ब्रेक थ्रु (छिचोलिएको) भएको छ । मुलुकमा निर्माणाधीन सबभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्य मात्र पूरा भएको छैन कि २०७५ पुसदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु हुने विश्वास जगाएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
राजेन्द्र महर्जन, मंसिर ५, २०७४
एकपछि अर्काे बम विस्फोट । विस्फोटको आकारमा वृद्धिसँगै घाइते हुनेहरूको संख्या बढ्दो । दैनिक रूपमा जारी शृंखलाबद्ध विस्फोटले त्रास जन्माएको छ, कुनै आस र प्रकाश फैलाएको छैन । निर्वाचनमा उठेका प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारमा त्रास फैलिनु अनौठो होइन होला । पूरा पढ्नुहोस्
युरोपेली च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत समूह 'ई' को खेलमा इङ्गलिस टोली लिभरपुलले स्पेनिस टोली सेभियाविरुद्ध ३-० को अग्रता बचाउन सकेन । ३-३ को बराबरीसँगै दुवै टोलीले १-१ अंक बाँडे । सेभियाले दोस्रो हाफमा ३ गोल गरेसँगै लिभरपुलले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने सुवर्ण अवसर गुमायो । पूरा पढ्नुहोस्
युरोपेली च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत समूह 'एच' को खेलमा जित हात पार्दै टोटेनहम हट्स्पर र रियल म्याड्रिड दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । रियलले एपोएल निकोसियालाई ६-० ले हराउँदा टोटेनहमले बोरुसिया डर्टमुन्डलाई २-१ ले पाखा लगायो । पूरा पढ्नुहोस्
हिमालयन शेर्पा च्याम्पियन
चन्द्रागिरि गोल्डकप च्याम्पियन हिमालयन शेर्पा क्लब ट्रफीसाथ ।तस्बिर सौजन्य : एनएसजेएफ
हिमालयन शेर्पा क्लबले प्रथम चन्द्रागिरि गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । नैकापस्थित चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मैदानमा मंगलबार भएको फाइनलमा हिमालयनले फ्रेन्ड्स क्लबलाई ३–१ ले पराजित गर्दै उपाधि जित्यो । पूरा पढ्नुहोस्
आर्मी र मनाङ भिड्ने
दोस्रो सताक्षी गोल्डकपमा मंगलबार बलका लागि संघर्ष गर्दै आयोजकका विमल घर्तीमगर (रातो) र मनाङका दोना थापा ।तस्बिर : अर्जुन राजवंशी/कान्तिपुर
मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब झिलझिलेमा जारी दोस्रो सताक्षी गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ । मनाङले मंगलबार दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक सतासीधाम स्पोर्टिङ क्लबलाई २–१ ले हरायो । उपाधिका लागि मनाङले बिहीबार त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पूरा पढ्नुहोस्
कोकाकोला अन्तरस्कुल राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको छात्रातर्फको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । दुर्गा मावि रौतहटले ब्राइट फ्युचर स्कुललाई ७–० ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्‍यो । उसको जितमा रश्मीकुमारी घिसिङ एक्लैले ५ गोल गरेकी थिइन् । थप दुई गोल निकिता थोकर र सविता रानामगरले गरे । पूरा पढ्नुहोस्
दुई अपरिचित टिम एसेजमा भिड्दै
ब्रिसबेनमा नेट्स अभ्यासमा अष्ट्रेलियाका डेविड वार्नर । एसेजको पहिलो टेस्ट बिहीबार सुरु हुनेछ ।तस्बिर : रोयटर्स
एएफपी, मंसिर ६, २०७४
नयाँ स्वरूपको अष्ट्रेलियालाई विश्वास छ, उसको पेस आक्रमणले इंग्ल्यान्डलाई फेरि एकपटक आतंकित पार्नेछ । जति बेला दुई अपरिचित टिम एसेज सिरिजको पहिलो टेस्टमा बिहीबार भिड्ने छन् । यो रहेको छ, टेस्ट क्रिकेटको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित उपाधिका लागि । पूरा पढ्नुहोस्
एपीएफ र आर्मी फाइनलमा
मध्यमाञ्चलविरुद्ध गोल गरेपछि आर्मीका खेलाडी । तस्बिर : कान्तिपुर
आयोजक त्रिभुवन आर्मी क्लब र डिफेन्डिङ च्याम्पियन सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ क्लब) प्रधानसेनापति पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलको फाइनल पुगेका छन् । मंगलबार पहिलो सेमिफाइनलमा आर्मीले मध्यमाञ्चललाई ३–१ ले पराजित गर्दै पछिल्लो संस्करणको बदला लियो । पूरा पढ्नुहोस्
नेपालगन्ज म्याराथन विजेता जुम्लाका दुर्गाबहादुर बुढा (बीच) । साथमा दोस्रो भएका खड्गबहादुर खड्का (रातो) र तेस्रो भएका गणेशसिंह ठकुरी ।तस्बिर : जनक नेपाल/कान्तिपुर
त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लबका धावकहरूलाई पछि पार्दै जुम्लाका दुर्गाबहादुर बुढाले तेस्रो नेपालगन्ज म्याराथनको उपाधि जितेका छन् । दुर्गाबहादुरले मंगलबार २ घण्टा २६ मिनेट ५८ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै उपाधिसँगै ५५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार हात पारे । उनी विभागीय टोलीका खेलाडीलाई झन्डै २२ सेकेन्ड पछि पार्दै विजयी बने । अन्य शीर्ष आठभित्र विभागीय टिमका खेलाडीले सफलता पाए । पूरा पढ्नुहोस्
मंगलबार सेयर कारोबार मापक नेप्सेमा ३.०८ अंकले सुधार भएको छ । अघिल्ला ४ कारोबार दिन लगातार रूपमा घटेको नेप्से मंगलबार सुधारिएको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा मंगलबार नेप्से करिब ०.२१ प्रतिशतले बढेर १ हजार ४ सय ७२.२४ विन्दुमा उक्लिएको हो ।
प्रतीक्षा काफ्ले, मंसिर ६, २०७४
भीरकोट नगरपालिकाको बयरघारी बजारस्थित सिद्धार्थ पार्टी प्यालेसमा कामदारलाई यतिबेला भ्याइनभ्याई छ । बिहान उठेदेखि कामधन्दामा व्यस्त भएका कामदारहरू अवेरसम्म सुत्न पाउँदैनन् । कामदार मात्र होइन प्यालेस सञ्चालकलाई पनि दौडधुप छ ।
५२ वर्षपछि बढ्यो तलब
शंकर आचार्य, मंसिर ६, २०७४
सामान्यतया सरकारी कर्मचारीको तलब दुई–चार वर्षभित्रै बढ्छ । यहाँस्थित गुठी संस्थान अधीनस्थ पारसनाथ महादेव मठका कर्मचारीको तलब भने संस्थानले ५२ वर्षपछि बढाएको छ ।
बलराम घिमिरे, मंसिर ६, २०७४
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले रसुवागढी नाकाको व्यवस्थापनलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । पहिलो चरणअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा चीनसँगको व्यापारिक नाकाको व्यवस्थापनलाई उनीहरूले मत तान्ने एजेन्डा बनाएका हुन् । भूकम्पले तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनसँगको व्यापार रसुवागढीबाट हुन थालेको हो ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको संघारमा जिल्लामा एक हजार र पाँच सय दरका नक्कली नोट देखिन थालेका छन् । उम्मेदवारहरुले मतदाता प्रभावित पार्न पैसा बाँड्ने गरेको चर्चासँगै सदरमुकाम बेनीका बैंक तथा सहकारीहरुमा नक्कली नोट फेला परेपछि यहाँको चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।
दुई मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट बढाउन केयूको लबिङ - ०९:०० PMभोलि रातिदेखि दलहरुले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने - ०७:३२ PMतीनजना सचिवमा बढुवा - ०७:१८ PMमहत र ढकालसित एक–एक करोड धरौटी माग - ०७:०८ PMबम राखेको अभियोगमा शिक्षक पक्राउ - ०७:०७ PMदाङमा दुर्घटना, दुईको मृत्यु - ०६:२७ PMनिर्वाचनको मुखमा दैनिक सयौंं मतदाता भारत पलायन - ०६:२५ PM
निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा लागेको अभियोगमा प्रहरीले शिवपुरी गाँउपालिका–३ लिखुस्थित महेन्द्र माविका शिक्षक मधुसुदन पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेकपाका ५ कार्यकर्ता पक्राउउम्मेदवारको भर कीर्तिपुरवासी‘टाउको लुकाउने छाना चाहियो’ मतदाता सोध्छन् -खोइ विकास ? खोइ रोजगारी ?
प्रज्ञा पारमिता बल्ल नेपालीमा
प्रज्ञा पारमिताका १६ ठेलीको परिक्रमामा सहभागीहरू ।
‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएको’ भन्दै मुलुक भित्र र बाहिर थुप्रै अभियान भएका छन् । ‘बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल’ शीर्षकमा फिल्मसमेत बनिसकेको छ । मुलुकका थुप्रै समुदाय बौद्धमार्गी छन्, उनीहरू बौद्ध दर्शनमा आस्था पनि राख्छन् । तर, बुद्धले ज्ञान पारमिताको रूपमा खासमा के भनेका थिए ? पूरा पढ्नुहोस्
“डेथ अफ अ साउन्ड म्यान” उत्कृष्ट
बीस फिल्ममध्ये थाइल्यान्डको ‘डेथ अफ अ साउन्ड म्यान’ ले यसपालिको ‘एकादेशमा इन्टरनेसनल सर्ट फिल्म फेस्टिभल’ मा बेस्ट फिल्मको ट्रफी जित्यो । पूरा पढ्नुहोस्
हालै सम्पन्न ‘एसिया आर्टिस्ट अवार्ड’ मा कोरियन–चाइनिज ब्यान्ड ‘एक्सो’ ले संगीत विधामा अवार्ड जित्यो । उसले फयाबुलस र मोस्ट पपुलर अवार्ड पनि आफ्नो पोल्टामा पार्‍यो । ब्यान्डकै सदस्य डीओले मोस्ट पपुलर एक्टरको ट्रफी ग्रहण गरे । एसियन म्युजिकमा सबैभन्दा बढी ग्रान्ड अवार्ड (देसङ) विजेताका रूपमा एक्सोको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
नवीन पोखरेल, मंसिर ५, २०७४
हुन त प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतको लामो चुनावी अभ्याससंग नेपालको चुनावलाई तुलना गर्न त नमिल्ला, तरपनि बेलायतको चुनाव तथा राजनीतिक संस्कार र यहांका दलले जारी गर्ने घोषणापत्रबाट सिक्न सकिने कुरा चाहिं निकै छन् । पूरा पढ्नुहोस्
बदलिएको राजनीति, नबदलिएका जनता हीरा म्याडम हीरा नै रहिछिन् सम्झनामा त्यो खैरेनीको जाम पूर्खाको वीरता हेर्न पुग्नै पर्ने सिन्धुलीगढी
(एजेन्सीहरू), मंसिर ६, २०७४
चीनको ठूलो सोसल मिडिया कम्पनी ‘टेन्सेन्ट’ ले फेसबुकलाई सम्पत्तिमा उछिनेको छ । ‘विच्याट’ सन्देश एप सञ्चालन गर्ने ‘टेन्सेन्ट’ को सम्पत्ति ५ सय अर्ब डलर पुगेको छ । हङकङमा मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य २ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै फेसबुकलाई उसले पछाडि पारेको हो । यो कम्पनी विश्वकै पाँचौं स्थानमा सूचीकृत भएको टेलिग्राफ अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ । पूरा पढ्नुहोस्
चुनावकाे मुखमा फेसबुकमा ‘फेक’ धन्दारंगिए सामाजिक सञ्जालअनलाइनमा गलत विज्ञापन गरे जरिवानाअनलाइनमार्फत लघुउद्यमीको लगत